Pakati peTartu yakashongedzwa nemubhedha wemaruva embatatisi - "Potato System" magazini
Center Tartu yakashongedzwa mbatata ruva mubhedha
Pakati paMay, nyanzvi kubva kuEstonia Institute of Plant Viwanda vakadyara chikamu chemakumi mashanu emamirimita pakati peTartu nembatatisi.
Mhando dzakasiyana dzezvirimwa zvine tuberous dzakasimwa pane diki saiti kamwechete, uye sezvo nyanzvi dzakabva kunzvimbo yeJõgeva, paive nenzvimbo yemhando dzakasiyana dzeJõgeva kollane, iyo "Chaiyo Kamera" yakataurwa neMugovera.
Chinangwa chechiitiko ichi kuunza hupenyu hwekumaruwa padhuze padhuze nevanhu veguta.
“Pamwe mumwe munhu haachaziva kuti [mbesa iri kurimwa] inoita sei zvakare. Tichadyara kuitira kuti vanhu vemutaundi vaone. Semaonero angu, pano vane mamiriro akanaka ekukura, dai ruzha urwu nevagari veguta vakasapindira, ”akadaro Terje Tähtjärv, mutsvagiri weInstitute.
Muzhizha, mushure mekuvhurwa kwe "mota-isina" boulevard, iyo Institute of Crop Production iri kuzodyara mimwe miriwo munzvimbo ino, semuenzaniso, matomatisi.
Export gumi gumi reMiloslavsky